About Us - Ma Anshan Steel fonosana Teknolojia Co., Ltd
Ma Anshan Steel Packaging Materials Technology Co Ltd dia ao amin'ny Valan-javaboarin'i Taibai, Tanànan'ny Ma Anshan, Faritanin'i Anhui, any Sina, manampahaizana manokana momba ny R&D ary ny fanamboarana fitaovana fanamboarana anti-corrosive sy laminated. Mifantoka amin'ny fanomezana ny kalitao avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa ao amin'ny Metallurgy, Auto faritra sy ny indostria maritrano isika.
Izahay dia orinasa manana ny orinasa 9009001 QMS, ary nahazo patina nasionaly maro. Ny fonon-tsarenanay indrindra dia manarona: taratasy anticorrosion VCI, horonan-tsary VCI, horonan-tsarimihetsika mahery vaika, takelaka fanamboarana rano sy famonoana vita amin'ny lamba, lamba vita coated tsy misy loaka, sns. Ny fahatongavan'ireo vokatrao dia tonga amin'ny fenitry ny JIS sy MIL, ary ny vokatra dia manana nandalo ny fitsapana SGS ary afaka mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fanondranana EU - RoHS Directives.
Ny mandroso fikarakarana teknolojia sy avo & marina famokarana fitaovana, ny vokatra dia be ekena sy ampiharina eo amin'ny samihafa mpanjifa, toy ny Baosteel, MaSteel, Valin ArcelorMittal Automotive Steel (Vama), China Zhongwang, YIEH PHUI TECHNOMATERIAL, Yodogawa-Shengyu, ANTOLIN, BREMBO , sy ny sisa.
* CAPTCHA: Azafady fidio ny Hazo
* CAPTCHA: Azafady fidio ny fo